Madda Walaabuu Press: MANDAROOTA FI MAGAALAAWWAN OROMIYAA – OROMIAN TOWNS AND CITIES: Kutaa Torbaffaa
Kuunnoo, gara harka mirgaatiin ganda beekamaa fi eebbifamaa kan Seegamal (“Dabra-Libaanos“) jedhamu agartu. Seegamal “gadaama” hedduu beekamu. Isa kan hundeesse ayyaantuu warra Habashaa kan “Takla-Hayimaanot” jedhamu. Akka manguddooleen Oromoo tokko tokko kanneen seenaa beekan himanitti namni kun Oromoo ture. Dabalees ilma qaalluu Oromoo kan ture. Inni ganda Ittisaa jedhamu kan naannoo Mojoo fi Manjaar (“Minjaar“) jidduutti argamutti dhalate. Booda massaa (sababa) hin beekamneen: “biyyaa-bayee gara Biyya Sidaamaatti godaanee qubachuun, yeroon booda waayyuu (ayyaantuu) isaanii kan baay’ee beekamu taye“, jedhu manguddooleen kuni. Seegamal kun kunoo wiirtuu Biyya Oromoo isa naannoo Salaalee keessatti argama. Seegamal bira yoo dabartan goodaa (“plain; prairie“) fi caffee fardeen kumni sonaan hedduu keessaa imimsitu, naannoo Jidda jedhamu dhaqqabdu.
Kan jedhetoo sirbe sun kunoo, dubara baddaa Salaalee ishii ilmi Oromoo Xilahuun Gassasaa “lookoo morma warqii” jedhuun san argitu. Akkuma Aliin keenya hime san garaan keessan “boowuu/ booyuu” jalqabe mitii-ree? Biyya Oromoo Salaalee lafaa margi, sa’aa namni isaa midhagaa kana daawwachaa adeemsa keenya garuma ganamaan baaneef sana, gara magaalaa Ficheetti haa xuruurru! Silaa jechi Oromoo inni “fiche” jedhamu kun hiikkoon isaa maal akka tahe beektuu? Kanneen Waaqni gara-laafinaan uummata Oromoo fi Oromiyaa badhaase keessaa bineeyyii daggalaa gosoolii addaddaatu argamu. Isaan keessaa gosa:bosonuu, borofa, tigrii fi kurupphee (kurupphoo) faa ni yaadattu. “Fiche” tun dubrii (durbii) kurupphee fayi. Waan bakka amma “Fiche” jedhamu kanatti bineeyyin gosa kurupphee kun heddumminaan turaniif maqaan kun kennameefi. Magaalaa Fichee irraa yoo xiqqooshii gara kaabaatti deemtan laga guddichaa fi beekamaa Jamma-a ceetu. Laga kana ceetanii naannoo Oromiyaa beekamaa Darraa seentu. Ammas garuma fuulduraatti yoo deemtan biyya naannoo Oromoo Tuulamaa keessa kutuun naannoo Oromoo Walloo keessaa isa Booranajedhamu seentu. Wallo keenya yeroo biraa, karaa biraatiin dhaqnaatii amma qalbii fi sammuun keenya Salaalee biyya jangoota hedduu, biyya Taaddasaa Birruu fi biyya Agarii Tulluu faatti haa xiyyeeffamu!
Kunoo, erga faaraan haara-baafattani mee amma gara Garba Gurraachaatti haa qajeellu! Kanaan dura maqaan Salaale jedhamu kun maqaa gosa Oromoo otoo hin taane, maqaa gaaraa tahuu isaa akeekkaneeti ture. Kuunnoo, Gaarri Salaalee kun amma karaa harka-bitaanii sirriitti isinitti muldhachaa jira. Gosoliin Oromoo kanneen Salaale keessatti argaman marti hortee Sadeen Tuulamaa ti. Heddumminaan kan naannoo kanatti argaman gosoolii:Kuyyuu, Yaayyaa fi Jaarsoo ti. Kunoo amma gara Laga Abbayyaatti xuruuraa jirra. Magaalaawwan Gabra Gurraacha, Tulluu Milkii (7) fi Jaarsoo (8) /”Gohaa-Tsiyoon“/ keessa dabarreeti, isaan keessattis xiqqoo haara-baafachuun Laga Abbayyaa isa karaa kanaan daangaa Oromiyaa fi Biyya Amaaraa (Goojjam) jidduutti argamu dhaqabna jechaa dha.
Sirbi Oromoo Salaalee sirbamee hin quufamu; dhagayamee hin nuffamu. Shagginnii fi bareedinni walaloota kanas raajeffatamaa dha. Maarree, Waaqni tokkichi, gurraachi garaa garbaa, leemmoon garaa taliilaa kun gaafa Oromiyaa teenya uumu san ittuma yaaduun, haara sirriitti baafachuun: lafaa-nama, sa’aa-marga, sirbaa-dubbii, arjummaa-qalbii, gamnummaa-jagnummaa, safuu-safeeffata, obsaa-gaarummaa fayiin jijjifaaree, goggonfee badhaase. Badhaadhina keenya kanaaf, uummanni Oromoo marti hooquba jechuu qaba! Kunoo, otuma kana walitti himaa, biyya abbaa keenyaa isa karaa kanaan jiru daawwachaa deemnuu, deebinetoo magaalaa Fichee seenuutti jirra. Akkuma duraan jedhame san asuma bullee sirriitti bayyanachuun, ganama waaree keessa (gara sa’aa 10) Finfinneetti deebina. Finfinnees waa turuun booda gara Sandaafaa, Bakkee fi Shanoo faa deemna.